omama Modern Kunzima ukucabanga ukuphila kwami konke ngaphandle namanabukeni. Ziyakwazi ukhululekile kakhulu ngomntwana, enze kube nokwenzeka ukuba ugweme izinkinga ezifana, like umbhede ezimanzi noma imaphi amanzi amile ekhaphethini. Namanabukeni "Umkhumbi", ukubuyekezwa zazo sizohlola kulesi sihloko, namuhla uthole iningi ukuthandwa.
brand Modern amazwe zikufakazela ngokwabo kahle kangangokuthi abanye abazali abasha musa ukufunda funa yethu, izesekeli ezifuywayo izingane. Futhi yize. Namanabukeni izingane "Umkhumbi" asikho bucayi kakhulu izinga. Umenzi wazama ukuwenza abe ukhululekile futhi ephephile.
uhlelo yabo isivikelo ukuvuza siqukethe izingqimba ezintathu. Eyokuqala ivumela umswakama ugxile kweso. Isikhumba umntwana uhlala dry hhayi nabo umchamo. Eyesibili ukuqinisekisa ukuthi woketshezi nombala basakaza kulo lonke inabukeni futhi buthelela kwelinye inhlama. Isendlalelo sesithathu umsebenzi obaluleke kakhulu: it siguqule ketshezi wangena ijeli ekhethekile. Lokhu kungenxa impregnation ekhethekile, okungadingi ukulimaza impilo yengane.
Lolu hlelo ivikela umntwana namagciwane ukukhula, neutralizes iphunga othize, ukuvumela isikhumba ukuphefumula. Ngeze, abantu abaningi bakholelwa ukuthi inabukeni akusho avuze ngenxa isakhiwo yayo has a ifilimu polyethylene ebamba ketshezi. Lena akuyona ngakho. Namanabukeni "Umkhumbi", okuyinto Izibuyekezo akhayo, kuphela unezithako ephephile.
Usayizi kulencane okuveza umkhiqizi, kuyinto ezine kwabayisishiyagalolunye amakhilogramu. Ziyakwazi jikelele ngakhoke efanelekayo ngisho ingane enkulu osanda kuzalwa.
Buthambile, abazi ukukuthinta isikhumba obucayi ingane. Ngokusho Izibuyekezo ikhasimende, Velcro kubo kukhona pretty okuthembekile. omama Abangenalwazi ngokuvamile uhlole ukuthi ukushintsha inabukeni, unbuttoning isikhathi sakhe izikhathi eziningi. Awukwazi ukhathazeke ukuthi ngeke ubambe.
Cuff emhlabeni imilenze futhi eyenziwe indwangu ethambile kakhulu. Ziyakwazi aminyene futhi ngesikhathi esifanayo ngobumnene ezizungeze izibunu wengane namathanga.
Ukugcina microclimate ezinhle ngaphakathi, "Isikebhe" inikeza isivikelo dermatitis. Kuyinto lokhu isikhumba isifo kuthinta izinsana eziningi. Uphenyo "Umkhumbi" namanabukeni onganquma okufanele ukwenze ukwethembeka. Abazali laba bafikile ukubashaya uthanda lokhu brand nezinye brand, owaziwa kakhulu.
Namanabukeni "Umkhumbi '(7-18 kg): Izibuyekezo
Kakade esekhulile umntwana udinga ukuvikelwa ukuvuza. Le nkampani iye zinakekelwe ukuthi, kanti abafana kanye namantombazane babekhathazeka e ukhululekile zabo futhi, okubaluleke kakhulu, ezomile. Ngeshwa, abanakho inkomba ukugcwaliswa, kodwa hhayi kanzima kangaka ukuze abone ngeso lenyama lapho sekuyisikhathi ukulishintsha. Inzuzo enkulu is abiza. Namanabukeni "Umkhumbi" wathola Izibuyekezo ezinhle, ngoba bonke izinga yakhe ukusebenza intengo zabo mncane impela. Ukuze uthole iphakethe yizicucu 64 wena nika ruble angaba ngamakhulu ayisikhombisa! Uma uqhathanisa izindleko esilinganayo namanabukeni nezinye brand, ungakwazi umangale ukuthi cishe kabili njengoba ehlukene esivuna a "isikebhe."
Hypo-allergenic izimpahla ezisetshenziselwa ukukhiqiza zabo kukhona imvelo futhi iphephile.
Lo sayizi ephelele izingane ezintathu izinyanga ezinhlanu. Ingane kulesi sikhathi uqala ngenkuthalo phenduka ngisho nokuzama phansi. Ukuma yokwakheka inabukeni ilingana kahle ekupheleni emzimbeni futhi kungaphazamisi ingane yakho ukwenza ukunyakaza kuqala eziyinkimbinkimbi.
Namanabukeni izingane "Umkhumbi" has ezihlukahlukene osayizi - kokubili izinsana nabantwana iminyaka emithathu. I ezinkulu "Maxi", zingabantu kulungele izingane enesisindo esingaba amakhilogremu angu-11 kuya kwabangu-25. Njengomthetho, intombazane ngaleso sikhathi ngenkuthalo ezihambayo: egijima, kukhasa, ukuhlola nxazonke. Siyabonga isikhumba nezimo ezisemaceleni ingane kungelona isibambo, ukunyakaza is hhayi sebehlushwa.
Namanabukeni, naphezu mncane, kwamukele eziningi eziwuketshezi. Kulokhu, ungenalo ukubukela njengoba ingane udonsa "isikhwama": wonke umswakama is ngokulinganayo basakaza phezu bonke ubuso. Yiqiniso, ungakhohlwa ukushintsha inabukeni ngesikhathi, ngaphandle kwalokho, inabukeni amawala akunakugwenywa.
Omama abaningi baye kakade ukuthi ukuthanda lokhu umakhi. Namanabukeni "Umkhumbi" wathola Izibuyekezo rave. Abazali bayajabula yokuthi isikhumba womntwana akuyona obomvu hhayi preet. Yiqiniso, kuyamjabulisa kubo eziphansi kakhulu, okuyinto akuphazamisi izinga: umenzi uye yehlelwa ngisho nasezintweni ezincane. Ukuvikelwa Three-ungqimba ihlinzeka ukuvikeleka sasivumela okuthembekile ngokumelene "nezimbongolo ezimanzi." Bona wazi ukuthi akukho iphunga umchamo, ngisho kusukela ophithizelayo kungekho inabukeni. Kuyinto nhlobo ngamakha yokufakelwa ukuthi kungabangela komzimba.
Kodwa ungakhohlwa ukuthi akuwona wonke namanabukeni kungenzeka lizifanele ingane. Kodwa uma ingane yakho bona abanakho ukuthambekela ukuqubuka, ungakhathazeki. Lo mkhiqizo izinga ukuze wonge isikhathi kanye nemali abazali abasha.
Kungani ingane akusho ukukhuluma
Hypotonia ezinsaneni: izimpawu kanye nokwelashwa
"Stalfond": Izibuyekezo emabhange esibonga
Indlela yokwenza imidwebo gel sula on izinzipho
Azovskie nokuhamba Petru 1 kafushane
Ukugqoka "Faberlic": libuyekeza abathengi